တုံ့ပြန်လွယ်အသားအရေရှိတဲ့ကလေးအတွက် ဘေးကင်းစိတ်ချရဆုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ » တုံ့ပြန်လွယ်အသားအရေရှိတဲ့ကလေးအတွက် ဘေးကင်းစိတ်ချရဆုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ
ကလေးရဲ့အသားအရေဟာ ချောချောမွတ်မွတ်၊ နူးနူးညံ့ညံ့လေးမို့ ဖေဖေမေမေတို့ မနမ်းဘဲ မထိဘဲ မနေနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအသားအရေလေးကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ဖို့က လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ ကလေးရဲ့အရေပြားဆိုတာ တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့မတူဘဲ အမေ့ဝမ်းထဲမှာတည်းက ကောင်းကောင်းဖွံ့ဖြိုးဖြစ်တည်နိုင်ဖို့ အချိန် ၉လလောက် ကြာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးတော့စိတ်ချလို့မရပါဘူး။ ကလေးတွေအတွက်ဆိုပြီး တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့အသားအရေနဲ့ဆံသားထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းအတော်များများမှာ အရေပြားကိုနှိုးဆွပြီး ထိခိုက်စေတဲ့ဓာတ်တွေပါတတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာသုံးတဲ့အခါ တချို့ကဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် တုံ့ပြန်လွယ်အသားအရေရှိတဲ့ကလေးတွေမှာ အရေပြားပြဿနာတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် parabens နဲ့ phthalates ၊dibutyl phthalate (DBP)၊ dimethylphthalate (DMP) နဲ့ diethyl phthalate (DEP) တို့က စိုးရိမ်ရတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပါ။ ဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထိတွေ့မိရင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟော်မုန်းပမာဏကို မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုဖြစ်စေပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းမှာပြဿနာတွေရှိလာစေနိုင်တယ်လို့ သုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီသုတေသနအများစုက တိရစ္ဆာန်တွေမှာလေ့လာခဲ့တာဖြစ်လို့ အထောက်အထားခိုင်မာမှုက အကန့်အသတ်ရှိနေပေမယ့် ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့စိတ်ချရမှုကလည်း သက်သေပြနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ရင်နှစ်သည်းချာလေးတွေအတွက် ဘေးကင်းစိတ်ချရဖို့ပဲ အဓိကထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
ကလေးအတွက် စိတ်ချရဆုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ
(၁) အရင်းအမြစ်ကို ကြည့်ပါ
ကလေးအတွက် အသားအရေထိန်းပစ္စည်းတွေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်ကရရှိသလဲဆိုတာ ကြည့်ဖူးပါသလား။ ဘေးကင်းစိတ်ချရမှုဆိုတာ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းက စတာပါပဲ။ ဒီတော့ အရည်အသွေးနဲ့ ဘေးကင်းစိတ်ချရမှုစံနှုန်းကောင်းမွန်ကြောင်း ဂုဏ်သတင်းရှိတဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရွေးပါ။ အရေပြားနဲ့ဓာတ်တည့်မတည့်ကိုအမြဲစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ကလေးအတွက်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ပြဿနာရှိနိုင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတစ်ခုလောက်ပဲပါစေဦးတော့ လက်ခံလို့မရနိုင်ပါဘူး။ အသေးအဖွဲလေးကနေ အန္တရာယ်ရှိတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
(၂) ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက ဘေးကင်းရဲ့လားဆိုတာ ကြည့်ရပါမယ်။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ phthalates နဲ့ parabens လို ဓာတ်တွေမပါတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကိုရွေးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ သဘာဝကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေကြောင့် သင့်ကလေးအတွက် သဘာဝ၊ အော်ဂန်းနစ်ထုတ်ကုန်တွေလိုအပ်တယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သဘာဝဆိုတိုင်း သေချာပေါက်ဘေးကင်းမယ်လို့ မသေချာပါဘူး။ တာရှည်ခံစေမယ့်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါရင်လည်း အလားတူပါပဲ။ ဒါတွေမပါရင် ကလေးတွေရဲ့အသားအရေနဲ့ထိတွေ့ရမယ့် ကုန်ပစ္စည်းမှာ မှိုတွေလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တာရှည်ခံပစ္စည်းဟာ FDA ကခွင့်ပြုထားတဲ့ ပမာဏနည်းနည်းလေးပဲ ပါရှိရမယ်ဆိုတာ သတိထားပြီး သေချာစစ်ဆေးပါ။
(၃) အရည်အသွေးဆန်းစစ်ချက်နဲ့ စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို လေ့လာပါ
ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ ကလေးတွေအတွက်သုံးရင် ဘေးကင်းစိတ်ချရမှုအာမခံနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်မဆို ဂရုတစိုက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖော်မြူလာက မျက်စိ သို့မဟုတ် အရေပြားကို ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်သလား။ ထင်ထားတဲ့အတိုင်း အကျိုးရလဒ်ပေးနိုင်ရဲ့လား။ ကလေးနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါ ဓာတ်မတည့်တာ၊ တုံ့ပြန်တာတစ်ခုခုဖြစ်လာနိုင်မလား စသည်ဖြင့် စဉ်းစားရပါမယ်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်က တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုတံဆိပ်ဖြစ်ရင် ကုန်ပစ္စည်းအပေါ် အရည်အသွေးဆန်းစစ်ချက်နဲ့ စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို လူသိရှင်ကြားဖွင့်ချထားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အရည်အသွေးဆန်းစစ်ချက်နဲ့ စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို လျှို့ဝှက်ချက်လိုကွယ်ဝှက်ထားတဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုရင်တော့ ထည့်ကိုမစဉ်းစားသင့်ပါဘူး။
(၄) ပြင်ပက လက်တွေ့အနေအထားတွေမှာ စမ်းသပ်ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရှာပါ
ကုန်ပစ္စည်းက သူအာမခံထားတဲ့အတိုင်း တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာ လုပ်ဆောင်ချက်ရှိရဲ့လား။ ဒါကိုသိနိုင်ဖို့အတွက် ကုန်ပစ္စည်းကို မတူညီတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာ ထပ်ထပ်ပြီးစမ်းသပ်ရပါမယ်။ ကုန်ပစ္စည်းကို အပူ၊အအေး၊ စိုထိုင်းမှုလွန်ကဲတဲ့နေရာတွေမှာမထားဖို့ label မှာ ညွှန်ကြားချက်ပါရှိရင်တောင်မှ အဲဒီနေရာတွေမှာရှိနေခဲ့ရင် ဘေးကင်းနေဆဲဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ စက်ရုံကထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကုန်ပစ္စည်းက ဘယ်ကိုရောက်မယ်၊ ဘာဆက်ဖြစ်မယ် ဘယ်သူသိနိုင်ပါ့မလဲ။ တခါတလေကျရင် ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ ဈေးကွက်ထဲမရောက်ခင် ပူနွေးစိုထိုင်းတဲ့ ဂိုဒေါင်ရုံတွေမှာပဲ သိုလှောင်ထားနိုင်လို့ပါ။
ဝယ်သူတွေအတွက်တကယ်တမ်းစဉ်းစားပေးတဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဟာ အမြဲမပြတ်ဆန်းစစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဝယ်သူတွေဆီက မှတ်ချက်တွေနဲ့ ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကို အမြဲနားထောင်ပေးတာကိုဆိုလိုတာပါ။ customer service ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေ ၊ လူမှုမီဒီယာတွေကတဆင့် ဝယ်သူတွေရဲ့အသံကို ဂရုတစိုက်အမြဲရှိတဲ့သူတွေကို ရွေးပါ။ ပြဿနာတွေများလာပြီဆိုရင် ကုမ္ပဏီက ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ဘေးကင်းစိတ်ချရမှုကိုသေချာစေဖို့ တာဝန်ယူစိတ်ရှိသင့်သလို ထိုက်သင့်သလောက် ကုန်ပစ္စည်းအဆင်ြ့မှင့်တင်တာတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကလေးအသားအရေ ထိန်းသ်ိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေသိထားသင့်လဲ
တုံ့ပြန်လွယ်အသားအရေရှိတဲ့ကလေးငယ်အတွက် ဂရုစိုက်ပေးရမယ့် အချက် (၁၀) ချက်
Taking Care of Baby’s Sensitive Skin. http://www.webmd.com/children/features/infant-skin#1. Accessed November 30, 2017.
5 Tips for Baby’s Skin. http://www.parenting.com/article/baby-skin-tips. Accessed November 30, 2017.
Safety Standards. https://www.johnsonsbaby.com/safety-standards. Accessed December 5, 2017.
ဂလတ်တို့စ် ဓါတ် ကို မချေဖျက်နိုင်သော ရောဂါ